दुई व्यापारीमाथि रु. ८५.९५ करोड बिगोबराबर विदेशी मुद्रा अपचलनको मुद्दा Bizshala -
दुई व्यापारीमाथि रु. ८५.९५ करोड बिगोबराबर विदेशी मुद्रा अपचलनको मुद्दा
काठमाण्डौ । भन्सार चोरी पैठारी गरेका मालवस्तुको भूक्तानीका लागि गैरकानूनी रुपमा मुद्रा पठाइ विदेशी विनिमय अपचलन गर्ने व्यवसायीविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको छ।
जेएसएस मोबाइल कलेक्सन एण्ड सर्भिसेज प्रालि र श्री श्याम इम्पेक्स सञ्चालक मोहन वंशल र गोविन्द वंशललाई रु ८५ करोड ९५ लाख २२ हजार बिगो बराबरको विदेशी विनिमय अपचलन गरेको विभागको आरोप छ। उक्त बिगो असुलउपर गरी तीन गुणासम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद साजयको मागदावी लिई बुधबार काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको विभागका महानिर्देशन दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए।
जेएसएस मोबाइल कलेक्सन एण्ड सर्भिसेज प्रालि र श्याम इम्पेक्समार्फत विदेशमा निर्मित मोवाइल, मेमोरीकार्डलगायत माल वस्तुहरु पटकपटक भन्सार नतिरी चोरी पैठारी गरी अवैध बिक्री गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ।
कानुनअनुसार माल वस्तुको निकासी वा पैठारी गर्दा अनिवार्य भन्सार विन्दुमा माल वस्तुको घोषणा गर्ने र लाग्ने महशुल भुक्तानी गरी निकासी र पैठारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस्ता मालवस्तु तेश्रो मुलुकबाट ल्याउँदा विदेशी मुद्रा भुक्तानी नगरी ल्याउन सकिँदैन।
ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा गैरकानुनी रुपमा विदेश पठाई विदेशी विनिमय अपचलन गरेको विभागले जनाएको छ। विदेशी विनिमय अपचलन गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ४, दफा ८(२) र दफा ९(ग) बमोजिम कसूर गरेकाले मुद्दा चलाइएको मैनालीले जानकारी दिए।
department of revenue investigation of Nepal
कोभिडप्रभावित उद्योगले भोलिदेखि विद्युत डिमाण्ड शुल्कमा छुट
काठमाण्डौ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको...
प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा मोतीलाल दुगड
काठमाण्डौ । संसद विघटनपछि भएको सरकार पुनर्गठनका क्रममा उद्योग...
डा. युवराज खतिवडाको ठाउँमा मोतीलाल दुगडलाई लैजाने तयारी
मैदा उद्योग संघको अध्यक्षमा पुनः दुगड, मैदा आयातमा पूर्ण
काठमाण्डौ । उद्योगीहरुले मैदामा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको उल्लेख...